स्वागत छ नयाँ बर्ष २०७६ को, नयाँ बर्षमा नयाँ सोच र नयाँ संकल्प, तपाइँकै हालमा छ यो बर्षलाई कस्तो वनाउने ! - सुनाखरी न्युज
स्वागत छ नयाँ बर्ष २०७६ को, नयाँ बर्षमा नयाँ सोच र नयाँ संकल्प, तपाइँकै हालमा छ यो बर्षलाई कस्तो वनाउने !
Posted on: April 14, 2019 - 1:00 am
आजवाट नयाँ बर्ष २०७६ शुरु भएको छ । यो बर्षलाई कस्तो र कति पलदायी वनाउने भन्ने बिषय प्त्येक मानिसको आफ्नै हातमा निर्भर छ ।
हो त, नयाँ बर्षसँगै हामी जीवनमा पनि केही नयाँपन खोज्छौ । वसन्त ऋतुको यो याममा रुख(बुट्यानले पालुवा फेरेझै हामी पनि जीवनमा ताजगी भर्न चाहन्छौ । अतः आगमी बर्षलाई कसरी फलदायी, स्मरणिय र प्रभावकारी बनाउने त ?
दिनभर सक्रिय रहने, आफ्नो काममा केन्द्रित हुने, जनसम्पर्क बढाउने जस्ता तमाम कार्यले तपाईंलाई सफलताको नजिक पुर्‍याउँछ ।
यसका साथी आफ्नो निजी जीवनलाई पनि महत्व दिनुहोस् । घर(परिवार, वालबच्चा, श्रीमान् वा श्रीमती, आमाबुवा सबैसँग रमाउने समय पनि छुट्याउनुहोस् ।
सकारात्म सोचौं सकारात्मक वनौं– सहयोग गरौं सहयोगको याचना गरौं ।